Inyikima enkulu i-6.1 inyikima ihlasela indawo yaseTokyo, akukho silumkiso se-tsunami
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJapan eziQhekezayo » Inyikima enkulu i-6.1 inyikima ihlasela indawo yaseTokyo, akukho silumkiso se-tsunami
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJapan eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Akukho ngozi yetsunami eJapan emva kwenyikima, kodwa iingcali zenyikima zilumkisa malunga nokwenzeka kwenyikima entsha enamandla.
Inkqubo yesilumkiso engxamisekileyo yahamba ezitalatweni ikomkhulu laseJapan njengoko inyikima enkulu yagungqisa iTokyo.
Eyona ndawo yayiphantsi komhlaba yayikumda weTokyo neChiba.
Kwakungekho nto ingaqhelekanga ichaziweyo isuka eTokai No. 2 kumzimveliso wamandla enyukliya eIbaraki Prefecture kufutshane naseTokyo.
The I-arhente yeMeteorological yaseJapan uxele ukuba inyikima enkulu ishukumise indawo yedolophu yaseTokyo namhlanje.
Intsingiselo yenyikima yangaphantsi komhlaba ibikumda we tokyo nase-Chiba prefectures, kubunzulu beekhilomitha ezingama-80.
Izakhiwo zatshintshela kwisixeko-dolophu saseJapan njengoko inkqubo yesilumkiso yongxamiseko yayihamba ezitalatweni.
Akukho nto ingaqhelekanga ichaziweyo isuka kwiTokai No. 2 yesikhululo samandla senyukliya eIbaraki Prefecture kufutshane tokyo, iingxelo zatsho.
Akukho kufa, ukonzakala okanye umonakalo owenziwe kukuzamazama komhlaba oxeliweyo ukuza kuthi ga ngoku.